Booliska Göteborg oo qaladkooda qirtay | Somaliska
Booliiska magaalada Göteborg ayaa qirtay in ay qalad sameeyeen markii ay isbuucii la soo dhaafay si naxariis daro ah u soo xireen nin falastiini ah oo argagixiso lagu tuhmay. Ninkaan Falastiiniga ah oo 39 jir ah ayaa sheegay in ay xaaskiisa iyo caruurtiisa hortooda lagu xiray asagoo qaawan oo gacmaha madaxa loo saaray. Booliiska ayaan sidoo kale haysan ogolaansho ay ku soo xiraan ninkaan ayadoo hada ay ku dhawaaqeeyn in ay sameynayaan baaritaan dhexdooda ah ayadoo la baarayo in ay si xun booliisku u dhaqmeen taasoo qaadan karta dhowr bilood sida ay sheegeen. Booliiska ayaa laga doonayaa in ay raali galin ka bixiyaan qaladka ay sameeyeen ka dib marka ay dhamaystiraan baaritaankooda.
Booliiska magaalada Göteborg ayaa qirtay in ay qalad sameeyeen markii ay isbuucii la soo dhaafay si naxariis daro ah u soo xireen nin falastiini ah oo argagixiso lagu tuhmay.
Ninkaan Falastiiniga ah oo 39 jir ah ayaa sheegay in ay xaaskiisa iyo caruurtiisa hortooda lagu xiray asagoo qaawan oo gacmaha madaxa loo saaray.
Booliiska ayaan sidoo kale haysan ogolaansho ay ku soo xiraan ninkaan ayadoo hada ay ku dhawaaqeeyn in ay sameynayaan baaritaan dhexdooda ah ayadoo la baarayo in ay si xun booliisku u dhaqmeen taasoo qaadan karta dhowr bilood sida ay sheegeen.
Booliiska ayaa laga doonayaa in ay raali galin ka bixiyaan qaladka ay sameeyeen ka dib marka ay dhamaystiraan baaritaankooda.